खोकी लागि रहन्छ ? थाहा पाउनुहोस् कारण
२०७६ कार्तिक ७ बिहीबार १०:१३:००
श्वासप्रश्वासका केही मांसपेशीहरु खुम्चिनाले यसले यसले छाती भित्रको चाप बढाउँछ र सास फेर्ने नलिमा रहेको ग्लोटिस भनिने ढक्कन खुलाउँछ र हावा द्रूत गतिले बाहिर निस्कन्छ । यसरी मांसपेशी खुम्चाउने काम र छातीको चाप बढाउने काम भने श्वासप्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न रोगहरुले गरिरहेका हुन्छन् ।
श्वासप्रश्वास सम्बन्धि धेरै रोगहरुमा देखिने खोकी मुख्य गरि निम्न रोगहरुको लक्षण हुन सक्छन । श्वासप्रश्वास नलिको ब्याक्टेरियल वा भाइरल संक्रमण (जसलाई हामी बोलिचालीमा रुघाखोकी भन्छौ )
१. सुक्खा खोकीः खकार बिना आउने खोकीलाई सुख्खा खोकि भनिन्छ ।